(အမ္မစတာဒမ်မြို့ မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
မြို့တည်နေပုံ နှင့် ဗိသုကာပညာ[ပြင်ဆင်ရန်]
ညဖက်ပျော်စရာများ နှင့် ပွဲတော်များ[ပြင်ဆင်ရန်]
↑ Berns, Jan; Daan, Jo (1993). Hij zeit wat: de Amsterdamse volkstaal (in Dutch). The Hague: BZZTôH, p. 91. ISBN 90-6291-756-9။
↑ De geschiedenis van Amsterdam (in Dutch)။ Municipality of Amsterdam။ 2008-05-21 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Amsterdam through the ages -A medieval village becomesaglobal city။ 2008-05-21 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အမ်စတာဒမ်မြို့&oldid=419059" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၅ ဩဂုတ် ၂၀၁၈၊ ၁၃:၃၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။